Ikhaya Lokuthuthuka Kwama-Franchise - Izakhiwo Ezithengiswayo | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Home Improvement
Ukuthuthuka Kwekhaya Kwamuva
I-Just Shutters Franchise
Amakethe weShutter Franchise Amathuba akhulayo, utshalomali oluphansi uhlobo lomkhiqizo onothando lwangempela lwamakhasimende. I-Just Shutters Franchise inikeza okuhlukile ...
Ikhaya Lokuthuthuka Kwezindlu Zasekhaya
Kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo etholakalayo ukwenza indlu yakho ibukeke kangcono ngosuku kanzima ukuze usebenzise yonke imibono uwedwa. Konke lokhu kufaka isandla ekwandeni okusheshayo okubonakala emhlabeni wonke kamuva nje komkhakha wokuthuthukisa amakhaya.
Izinhlobo ezahlukahlukene zezakhiwo zokuthuthukisa ikhaya
Uma ucabanga ngefenisha yokwenza ngcono ikhaya uma konke ocabanga ukukuhlanza kuyadabukisa ukuthi unephutha. Njengoba i-franchising ibona izinhlobo eziningi zezitolo zamathuluzi namabhizinisi wehadiwe azongena ekulweni nomhlaba wangaphandle. Ngakho-ke kukhona izimboni ezimbili ezahlukahlukene ezisebenza kulo mkhakha wonke kodwa futhi uhlangothi lwe-hardware / yezitolo oluthuthukiswayo lwegiya lusezingeni.
Kunezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezindawo zokwenziwa ngcono kwekhaya ezifana:
Isitolo sezingxenyekazi zekhompiyutha kanye nezitolo zokuthuthukisa ikhaya zokuthengisa
Izinsizakalo zokuhlanza ezihlanzekile nokuhlanza ekhaya
Iningi lazo lingaqhutshwa njenge Management Management, okusho ukuthi uphatha abasebenzi, abasebenza umthwalo wokuphuculwa kwemisebenzi ekhaya.
Kungani usebenzise iFranchiseek ukubhekabheka amathuba okuthuthuka kwasekhaya?
Ngincoma kakhulu ukuthi ubuke umkhombandlela wethu we-franchise wamazwe omhlaba onikeza amathuba athokozisayo wokuthuthuka kwasekhaya kusukela ngo-1998. Siphinde sinikeze ngamathuba ahlukahlukene wamalungelo we-franchise ngakho-ke uma amathuba okuthuthuka ekhaya engekho kuwe ungakhathazeki kusukela eFranchiseek siyaqiniseka ukuthi kukhona okuthile wonke umuntu.